Kastamka Mareykanka oo Jabiyay Rikoor La Wareeg ah La Wareegid Diyaaradeed AirPods | Waxaan ka socdaa mac
Canshuuraha Mareykanka ayaa jabiyay rikoor ku saabsan qabashada AirPods been abuur ah
Tan iyo markii ay Apple soo saartay tii ugu horreysay AirPods, kuwa been abuurka sameeya ayaa ku guuleystay bakhtiyaanasiibka. Ugu dambayntii waxay been-abuuri karaan aaladda Apple (waxaan dhahaa qalab, maahan kiisaska Apple Watch ama xargaha) waxayna isku dayaan inay "ku soo dhuuntaan" sidii asalka.
Markaa wax lala yaabo maahan in kastamka Mareykanka ay jabiyeen rikoodh sanadkan AirPod been abuur ah oo lagu qabtay xadka. Ku dhowaad 400.000 oo cutub 9-kii bilood ee la soo dhaafay. Maxaa dhar ah.
Hay'adda kastamka Mareykanka ayaa qabata tiro rikoor ah oo ah AirPod been abuur ah sanadkan. In ka badan 360.000 madax-madaxeed been-abuur ah oo been-abuur ah ayaa la qabtay 9-kii bilood ee la soo dhaafay. Qiimaha waxyaabaha la sheegay in lala wareegay ayaa dhaafay 62 malaayiin ee dollar.
AirPods been abuur ah ayaa had iyo jeer suuqa ku jiray tan iyo markii ay Apple sii deysay dhegaha wireless-ka 2016. Si kastaba ha noqotee, kastamka Mareykanka waligiis ma arkin heerka been-abuurka ee soo gaaraya xadka Mareykanka sidii sagaalkii bilood ee la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay daabacaan Macluumaadka, in ka badan 360.000 dhagaha dhagaha been abuurka ah ayaa la qabtay sagaalkii bilood ee la soo dhaafay iyadoo qiimaha guud ee ka badan 62 milyan oo doolar. Hay'addu waxay tiri, marka la barbardhigo, kaliya qiyaastii $ 3,3 milyan oo sameecado sameecado been abuur ah ayaa la qabtay dhowr sano ka hor.
AirPod-yada Apple waxay si dhakhso leh u noqdeen dhagaha dhagaha wireless-ka ugu caansan suuqa waxyar uun ka dib markay bilaabeen. Maanta, khadka Apple's AirPods aad buu u guuleystey oo wuxuu noqdey shirkad liis gareyneysa. Fortune 100 hadday ahaan lahayd shirkad ka gaar ah shirkadda Apple lafteeda.
Aad u taxaddar oo ka soo iibso AirPods-kaaga kaliya goobaha lagu kalsoon yahay. Ka fogow dalabyada aan la diidi karin ee ku yaal dukaamada aan sumcadda lahayn ama loo qaybiyeyaasha idman, wax aad uga yar goobaha gacan labaad sida Wallapop. Waxay u badan tahay inay yihiin AirPods been abuur ah.
Safka hadda ee AirPods waxaa ka mid ah AirPods, AirPods Pro iyo sameecadaha dhagaha AirPods Max dhawaan la sii daayay. Shirkadda ayaa la filayaa inay shaaca ka qaaddo jiilka soo socda ee AirPods dabayaaqada sanadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Canshuuraha Mareykanka ayaa jabiyay rikoor ku saabsan qabashada AirPods been abuur ah
Nooca cusub ee macOS 11.5 RC oo ay soo saartay shirkadda Apple